DARK DAY: Zimbabweans Remember 27 June 2008, Mugabe Ran A Solo Election. - DailyTimes Zimbabwe
By DailyTimes Editor / June 27, 2021
A dark day in Zimbabwe history, 27 June 2008, the late Zanu PF leadership, Robert Mugabe ran a solo election after the opposition MDC candidate the late Morgan Tsvangirai had pulled out due to violence targeted against his supporters by state security agents.
Each year on the 27th of June, Zimbabweans always remember the day and the memories are not rosy in any way as they are littered with sad pictures of tortured people as Mugabe sought to reverse the March presidential election result in which he was defeated by Tsvangirai.
Mugabe would go on to claim victory and got sworn in before flying out to an African Union summit where he was told to sit down with Tsvangirai in what culminated in a government of national unit.
Even though, Mugabe negotiated with Tsvangirai and Mutambara, Zimbabweans still remember the events leading to 27 June as thousands of people were displaced, hundreds dead as soldiers and secret service agents were deployed across the country to reverse Mugabe’s electoral defeat.
By DailyTimes Editor / June 26, 2021
By DailyTimes Editor / June 16, 2021
By DailyTimes Editor / May 10, 2021
By DailyTimes Editor / April 16, 2021
Kenya grants Shona community citizenships who immigrated in the 1930s & 1950s